Nahatsapa, fitaovana ekolojika | Fanavaozana maintso
Mahatsapa, fitaovana ara-tontolo iainana
Adriana | | Trano maintso, Tontolo_iainana
Ny fironana amin'ny fampiasana ny Fitaovana ekolojika mitombo isan'andro isan'andro ho toy ny fomba hampihenana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana ireo vokatra ampiasaintsika isan'andro.
El tsapan'ny izy io dia iray amin'ireo fitaovana vaovao lasa malaza. Ity dia lamba izay manana toetra mampiavaka azy fa tsy tenona fa vita amin'ny kofehy volon'ondry izay ampiarahina amin'ny setroka sy tsindry.
Ity fitaovana ity dia manomboka mahazo fahalianana bebe kokoa amin'ireo mpanao asa tanana, mpandraharaha amin'ny famokarana vokatra samihafa.
Mora sy mora ampiasaina ny fahatsapana, ekolojika sy organika izy io satria ny kofehy efa vita dia namboarina, 100% izany recyclable y biodegradable ka tsy mora lasa fako io.
Ankoatr'izay, ny tsapa dia mamonjy angovo amin'ny famokarana ary manana toetra toy ny faharetana, antistatic, thermal ary acoustique insulation. Noho io antony io dia ampiasaina amin'ny famokarana vokatra marobe.
Azonao atao ny mividy ny tsapa amin'ny loko isan-karazany hanaovana singa samihafa. Ny sasany amin'ireo vokatra azo atao amin'ny tsapa dia: kitapo, tranga, asa-tanana, kiraro, paingotra ary kojakoja lamaody hafa, akanjo, tapis, poketra, fitoeran-telefaona, ondana, ankoatry ny maro hafa.
Atolotra ho azy ireo ny atrikasa hianarana ny fanaovana an'ity fitaovana ity ary koa ny vokatra azo atao miaraka aminy. Misy ihany koa ny boky maromaro izay manome vaovao momba an'io noveloma sy fitaovana ekolojika io.
Ny fampiasana vokatra vita amin'ny fahatsapana dia safidy ekolojika amin'ny vokatra maloto sy sarotra simika toy ny plastika.
Ankoatr'izay dia hiara-hiasa amin'ireo mpamokatra madinidinika izay manamboatra vokatra samihafa amin'ny tanana.
Amin'ny maha mpanjifa antsika dia afaka misafidy fitaovana ekolojika amin'ny vokatra novidintsika isika ary amin'izany dia manohana ireo miloka endrika maharitra.
Afaka manampy amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana isika rehetra na dia mahazo zavatra iray aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Mahatsapa, fitaovana ara-tontolo iainana
Timer hampihenana ny fanjifana herinaratra